सुवास नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट ब्याक
November 28, 2021 N88LeaveaComment on सुवास नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट ब्याक
चितवन । नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षको रेसबाट ब्याक हुने संकेत गरेका छन् । उनले पार्टी एकता कायम हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताएका छन् । ‘पार्टी एकता कायम गर्नुपर्छ । त्यही मेरो मान्यता हो । पार्टीको हितका लागि अध्यक्षले सही निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने । सञ्चारकर्मीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको […]
November 28, 2021 N88LeaveaComment on अध्यक्ष मण्डलको बैठक सुरु, सबैमा सहमति जुट्यो
चितवन । सौराहमा जारी नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डलको बैठक सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्दसत्र स्थलमा पुगेपछि बैठक सुरु भएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् । कमिटीको नाम प्रस्ताव गर्ने सर्वाधिकार पाएका ओलीले बन्दसत्र रोकेर दिनभर नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । नेताहरु विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ […]
हिजोआज नेपाली दम्पतीहरू यौ’न वि’चलनका कारण सम्बन्धवि’च्छेदको अवस्थासम्म पुग्ने गरेका छन् । दम्पतीमा हुने गलत बुझाइ वा यौ’नमा हुने असन्तुष्टिको कारणले पनि धेरै दम्पतीको वि’ग्र’ह भएको देखिन्छ । यही यौ’नको जीवन र यसले निम्त्याउने समस्याको बारेमा मनोविद् करुणा कुँवर विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : मान्छेको यौ’न रूचिमा मौसमको कुनै प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन ? […]
November 28, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को ? ओलीलाई नेम्वाङले दिए तीन विकल्प
चितवन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक अरुलाई नेता नमान्ने अडानमा बसेका नेकपा एमालेको नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहमतिको तीन विकल्प अघि सारेका छन् । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सौराहमा चलिरहेको महाधिवेशनमा नयाँ कमिटीको नाम प्रस्ताव गर्ने सर्वाधिकार लिएका ओलीलाई नेताहरु विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची बुझाएका छन् […]
भीम रावल अब एमालेकाे ‘सेकेण्ड म्यान’ सुवास र इश्वर ट्वाँ
November 28, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावल अब एमालेकाे ‘सेकेण्ड म्यान’ सुवास र इश्वर ट्वाँ
कामाडौं । नेकपा एमालेमा केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची तयार पार्ने जिम्मा पाएका चार नेताले पदाधिकारीमा सहमति गर्ने विकल्प पनि सुझाएका छन् । चितवनको सौराहामा जारी एमालेको दशौं महाधिवेशनको बन्दसत्रले शुक्रबार भीम रावल र घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरुको विरोधका बीच कमिटीको नामावली प्रस्ताव गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो । ओलीले केन्द्रीय समितिको नाम प्रस्ताव […]
November 28, 2021 N88LeaveaComment on चार नेताले ओलीलाई बुझाए ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची
कामाडौं । नेकपा एमालेका चार नेताले ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन् । स्रोतका अनुसार वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने अरु नाम क्लस्टर मिलाएर थपिएको छ । सौराहमा जारी एमालेको दशौं महाधिवेशनको बन्दसत्रले शुक्रबार भीम रावल र घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरुको विरोधका बीच कमिटीको नामावली प्रस्ताव गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष […]
कोठा नम्बर ४०१ मा तयार हुँदैछ एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची
November 28, 2021 N88LeaveaComment on कोठा नम्बर ४०१ मा तयार हुँदैछ एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची
कामाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली शर्मा ओली निकट चार नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची बनाउन छलफलमा जुटेका छन् । सौराहमा जारी एमालेको दशौं महाधिवेशनको बन्दसत्रले शुक्रबार भीम रावल र घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरुको विरोधका बीच कमिटीको नामावली प्रस्ताव गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिएको थियो । ओलीले विहान १० बने बन्दसत्र राखेका थिए । तर उनी […]
चितवनकाे चिसाेले कठ्याङ्ग्रिएपछि दुर्गा प्रसाइँ फायर !
November 28, 2021 N88LeaveaComment on चितवनकाे चिसाेले कठ्याङ्ग्रिएपछि दुर्गा प्रसाइँ फायर !
काठमाडौ । कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा विचार,सिद्धान्त र कार्ययोजना तथा मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिइएपछि के के न नयाँ देख्न पाइन्छ भन्दै बसाइँ सर्नेलाई कस्तो लाग्ला ? युवा पुस्ता स्वयंले ले सिक्न पाउला ? हुन तः ती पक्षमा ध्यान दिनको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौटदेखि नै विधि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आफ्ना भएपछि जस्तालाई पनि टिप्दाको परिणाम अहिले एमाले महाधिवेशन […]
November 28, 2021 N88LeaveaComment on ओलीले बनाए १८ पदाधिकारीको सूची, को-को नेतालाई गरियो समावेश ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १८ जना पदाधिकारीको सूची तयार पारेका छन् । उक्त सूची शनिबार राति तयार पारिएको हो । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरूका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र भीम रावललाई समावेश गरिएको थियो। त्यसैगरी महासचिवमा शंकर पोखरेलको प्रस्ताव आएपछि पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए […]
भीम रावलको पर्चा बाँड्नेहरुलाई एमाले स्वयंसेवकले बाहिर निकाले
November 28, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावलको पर्चा बाँड्नेहरुलाई एमाले स्वयंसेवकले बाहिर निकाले
चितवन । नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका केही प्रतिनिधिहरूलाई भीम रावलको पर्चा वितरण गरिएको छ । पर्चा बाँड्दै मूल गेटसम्मै पुगेका रावल पक्षका कार्यकर्ताहरुलाई एमाले स्वयंसेवकहरुले यहाँ पर्चा बाँड्न पाइँदैन भन्दै बाहिर पठाइदिएका हुन् । बन्दसत्रको हलभित्र प्रवेश गर्न लामबद्ध भएकाहरुलाई रावलका कार्यकर्ताहरुले पर्चा वितरण गरेका थिए । ‘मेरो उम्मेदवारी किन’ लेखिएको भीम रावलको […]